Home » Akụkọ ụgbọ elu » Ndị njem Qatar Airways na-ebuga enyemaka ahụike na akụrụngwa na India
Ndị njem Qatar Airways na-ebuga India na-ebu enyemaka ahụike na akụrụngwa iji kwado mbọ enyemaka COVID-19
Ihe enyemaka 300 sitere na gburugburu ụwa hapụrụ n'ụgbọ ibu ụgbọ elu atọ si Doha gaa India
Convoy bụ akụkụ nke ebumnuche ụgbọ mmiri WeQare
Mbupu ibu gụnyere ngwa PPE, ikuku oxygen na ọgwụ ndị ọzọ dị mkpa
Ndị njem Qatar Qatar 777 Cargo Boeing 300 na-ebu ngwongwo gara India taa, na-ebu ihe dị ka tọn 19 nke ọgwụ si n'akụkụ ụwa niile iji kwado mbọ enyemaka COVID-XNUMX. Flightsgbọ elu atọ ahụ hapụrụ otu mgbe nke ọzọ gafere Bengaluru, Mumbai na New Delhi dị ka akụkụ nke atụmatụ Qatar Airways Cargo nke WeQare.
Qatar Airways Group Chief Executive, Onye ukwu Mazị Akbar Al Baker, kwuru, sị: “Mgbe anyị hụrụ na oke iru uju mmetụta mmetuta ọzọ nke ọrịa COVID-19 a metụtara ndị mmadụ na India, anyị maara na anyị ga-abụ akụkụ nke mbọ ụwa niile kwado ndị ọrụ ahụike dị ike na mba ahụ.
“Dị ka onye na-ebu ụgbọ elu na-ebu ụwa, anyị nọ n’ọnọdụ pụrụ iche inye nkwado enyemaka ndị mmadụ ozugbo site n’inye ụgbọelu ibuga ọgwụ ndị dị mkpa, yana ịhazi nhazi ọrụ. Anyị nwere olile anya na mbubata taa na mbubata ọzọ n'ime izu ndị na-abịa ga-enyere aka belata ibu arọ ndị ọrụ ahụike nọ n'ógbè ahụ ma nye ndị obodo metụtara nsogbu na India enyemaka.
Onye nnochite anya India na Qatar, onye nnochite anya ya bụ Dr. Deepak Mittal kwuru, sị: "Anyị nwere ekele dị ukwuu banyere mmegharị nke Qatar Airways iji buru ọgwụ ndị dị mkpa na-akwụghị ụgwọ na India ma na-akwado ọgụ megide COVID-19."
Mbupu ibu nke oge a gụnyere ngwa PPE, ikuku oxygen na ọgwụ ndị ọzọ dị mkpa, ma mejupụta onyinye nke ndị mmadụ n'otu n'otu na ụlọ ọrụ gburugburu ụwa na mgbakwunye na iwu nke ibu dị.